Maxxansaalee hundi hanga qarqara waraqaatti maxansuu hin danda'ani. Hedduun isaanii mudana hin maxansamne dhiisu.
LibreOfficen amala gari-ofmaa kan gara qarqara waraqaatti hanga danda'ame siiqsitee maxansuuf si gargaaran qaba.
Maxansaanke Faayilii - Qindaa'inoota Maxxansaa jalatti qindaa'uu isaa mirkaneessi.
Ajaja Dhangii - Fuula filadhuuti, gara caancala Fuulatti deemi.
Muudanoota jalatti gatii olaantoo ykn gadaantoo muudanoota fuulaa (bitaa, mirga, irra, jala) qindeessuu ni dandeessa. Too'annaa sana cuqaasiiti furtuu Page Up ykn Page Down dhiibi. Durargiin sarara mursaa'aa naannoo hangii maxansamu danda'utti agarsiisa.
Qaaqa cufuuf TOLE cuqaasi.
Title is: Fuula irraa Naannoo Maxansaamuu Danda'an Keessaa isa Olaantoo Filuu